Isa uye tora 50GB mugore ne MegaSync paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isa uye tora 50GB mugore ne MegaSync paLinux
Mega ibasa rekuchengetedza gore, Iyi ndiyo mutsivi weMegaupload ane mukurumbira iyo muvambi wevaviri Kim Dotcom kubva pakavharwa Megaupload anga atovimbisa kukwidza sevhisi zvakare, asi nguva ino chimwe chinhu chiri nani.
Mega inokurumidza uye iri nani, sevhisi iyi inotipa mukana wekuti tora account vakasununguka izvo inotibvumidza kutora kusvika makumi mashanu GB emafaira yakakura kwazvo ichienzaniswa nemamwe makwikwi akadai seADrive, Dropbox, Google Drive uye OneDrive.
Kunge ese ese mafaera masevhisi, isu tinokwanisa kuwana data redu kubva kune chero chishandiso nechidimbu chiri nyore chekushandisa browser uye neinternet kubatana.
Tichifunga izvi, chimwe chakanakira sevhisi ndechekuti ine multiplatform vatengi, kusiyana nevamwe vayo vanokwikwidza iyo isingape mutengi nerubatsiro rwekuzvarwa kweLinux.
Nezve izvi isu tine mukana wekukwanisa kuwiriranisa mafaira edu mafaira kubva kune chero chishandiso uye kuwana kwavari kubva kune chero awo.
Pachiitiko ichi Tichatora mukana wekumisikidza yepamutemo Mega mutengi mukugovera kwedu yeLinux iyo yatinogona kutora mukana kune iyo 50 Gb yekuchengetedza mahara.
Mutengi anonzi MEGAsync uye ichave iri pamusoro pekutarisa uye kuwiriranisa ruzivo rwatinoisa mufaira iro rinotigadzira mukati medesystem yedu.
Mariri, iyo data yatiinayo mugore ichaenderana pamwe neaya atinowedzera kubva pakombuta yedu uye aya anozoiswa kune yedu yega gore.
1 Dhawunirodha Mega mutengi
2 Isa MEGAsync paLinux
3 Nzira yekushandisa MEGAsync paLinux?
Dhawunirodha Mega mutengi
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kupfuurira kurodha pasi mutengi, pane izvi tinoenda kune webhusaiti yepamutemo yeMega uye isu tinoenda kumenyu muchikamu chekushandisa, chinongedzo ichi.
Iye zvino isu tinongofanirwa kusarudza kugovera kwatiri kushandisa, pamwe nekuvakwa kwemaitiro edu.
MEGAsync ine rutsigiro rweUbuntu, Elementary OS, Linux Mint, yakavhurikaSUSE, Fedora, Red Hat, CentOS, uye Archlinux.
Ehezve isu tinokwanisa kuisa mutengi kana tikashandisa kugovera kunobva pane izvi kana isu zvakare tine mukana wekushandisa MEGAsync nemamiriro chete ekushandisa Nautilus sezvo paine mubatsiri weizvi.
Waita kurodha pasi isu tinoenderera mberi nekuisa mutengi mune yedu system.
Isa MEGAsync paLinux
Iye zvino ndega isu tinofanirwa kuvhura terminall naCtrl + alt + T uye isu tinofanirwa kuzviisa isu mune dhairekitori kwatinorodha pasi mutengi uye tinoriisa nemirairo inotevera.
Para Debian / Ubuntu uye zvigadzirwa:
Isu tinofanirwa kuve nehumwe hunodiwa, tinovaisa ne:
sudo apt-get install build-essential autoconf automake m4 libtool libtool-bin qt4-qmake make libqt4-dev libcrypto++-dev libsqlite3-dev libc-ares-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev
Pakupedzisira tinoisa mutengi nemurairo uyu:
Kana dambudziko nekuvimbika richiripo, tinozvigadzirisa ne:
Para Fedora Tinoriisa nemirairo inotevera:
yum localinstall megasync*.rpm
Para vhura iwo murairo ndeuyu:
zypper install megasync*.rpm
Para CentOS uye Red Hat:
sudo rpm -i megasync*.rpm
Uye pakupedzisira ku ArchLinux:
sudo yaourt -S megasync
Nzira yekushandisa MEGAsync paLinux?
Maitiro ekumisikidza apera tinogona kumhanyisa iyo application kubva kune iyo terminal kana kuitsvaga kubva kune yedu yekushandisa menyu, kungave mune iyo terminal kana kuitsvaga isu tinozviita nekutaipa:
Se mutengi achavhura otikumbira kuti tipindeKana tikasava neakaundi, tinonyoresa uye toenderera nekupinda muchirongwa. Kana izvi zvaitwa, zvinotikumbira kuti tigadzirise kamwe chete, zvinotevera zvichaonekwa.
Pano inotipa isu kusarudza kana tichida kuwiriranisa emafaira edu mugore chose pamwechete nekombuta yedu kana Imwe sarudzo Iyo inotipa isu kuti tisarudze kuti ndeipi dhata yatiri kuzoenderana necomputer yedu.
Ini ndinogara ndichikurudzira kushandisa yechipiri sarudzo ye «Kusarudza kuenderana»Sezvo isu tichigona kusarudza kuti ndeapi maforodha atinoda kuwiriranisa panguva iyoyo (kurodha kuchikwata chedu).
Kana tikasarudza yekutanga sarudzo, inozotora ese mafaera atinawo mugore, saka kana uine zvakakwana magigs zvakabatikana zvinogona kunge zvisina kunaka kurodha pasi zvese kukombuta yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Isa uye tora 50GB mugore ne MegaSync paLinux
Chinyorwa chakanaka asi ini ndinofunga kuti mega haina kupa 50 gB kwenguva yakareba, kana iwe ukaita mabasa ekusimudzira kana sekudaidzira kwavanoti kubudirira, vanokupa kuwanda simba asi iwo makumi mashanu anongori mumaakaundi vasati vatengesa kuNew Zealanders.
Yakanaka posvo, MEGA ichiri kupa 50 GB yemahara, uye iri basa rakanaka, ndanga ndichiishandisa kubva payakatanga uye yaive imwe yekutanga gore masevhisi ekupa iyo yepamutemo vhezheni yeLinux.
David Perez-Guzman akadaro
Kutenda nechinyorwa, kungo taura kuti muArch, kumisikidzwa neyourt hakuitwe nemvumo yekutonga, unofanirwa kuigadzirisa:
#yaourt -S megasync pachinzvimbo che # sudo yaourt -S megasync
Pindura kuna David Perez Guzman
yiralisa acosta akadaro
Nyowani kuLinux uye inombogumbura nekuti ini handichinjike kune ino nyowani system, uyezve izvozvi zvese zvaoma nekuti ini handikwanise kurodha pasi google drive nekushanda zvirinani kubva pakombuta, zvakandiomera kuti ndishande kubva mugore chaiko kubvira Ini ndinogovana google drive ne2 maemail uye yakashanda kwazvo nemahwindo, asi ikozvino ivo votiisa linux uye kwandiri zvine ngozi, kana mumwe munhu akandibatsira pane izvi, ndichave ndinotenda.
Pindura yiralisa Acosta
Pedro Gonzalez placeholder mufananidzo akadaro
Kwaziso, ini ndangoisa lubuntu papc yangu uye ndinoda kuziva zvavanoreva ne "tinofanirwa kuzvimisikidza mufolda yatino kurodha pasi mutengi" uye kuti tingaite sei. Ndatenda
Pindura Pedro Gonzalez